HUB USB 3.0 - USB Type C yeMac kubva kuHooToo pamutengo wehafu | Ndinobva mac
HUB USB 3.0 - USB Type C yeMac kubva kuHooToo pamutengo wehafu
Imwe yekutanga yeChishanu Chishanu kutsvaga chigadzirwa chatinoda pamutengo wakaderera kwazvo. Muzviitiko izvi, zvinokurudzirwa kuti uone zvigadzirwa mukati megore uye woita runyorwa pfupi, zvino kana chiitiko ichi chasvika, tevera rondedzero imwe uye kutanga muzvigadzirwa zvakadzikiswa. Nhasi chimwe chezvigadzirwa izvi zvatinazvo pachiratidziro ndi HooToo hub ine USB Type C yekubatanidza, iyo inoderedzwa ne44% Naizvozvo chigadzirwa chinonakidza kwazvo.
Kana tikatarisa mahubhu aripo, tinowana ese marudzi, aine akasiyana magumo uye mavara akasiyana, maumbirwo ezvese zvido, ane akawanda kana mashoma madoko uye aine huwandu hwakawanda hwemitengo. Ino inguva hub inogona kubatsira zvakanyanya izvozvi kuti makomputa mazhinji (kwete maApple eApple chete) anowedzera aya madoko e USB C, ayo munguva pfupi iri kutevera ichave muyero, asi kuti nhasi tinoenderera mberi nekukwakuka uku Kunonetsa sarudzo yeimwe timu kana imwe zvishoma zvishoma. Chero zvazvingaitika Ichi chishongedzo kana chakafanana neichi chinonakidza kudzivirira matambudziko kana uchibatanidza zvigadzirwa zvedu kuMac apo kushandiswa kwe USB C kwakajairika.
Mune ino HooToo tinowana 3 USB 3.1 zviteshi, chiteshi cheHDMI, muverengi wekadhi re SD uye PD (PowerDelivery) basa, dzese dzakabatana kuburikidza ne USB Type C iyo inogona kubatsira kune 12-inch Apple MacBook kana yazvino MacBook Pro.
Ichi ndicho chinongedzo chekutenga cheiyo HooToo hub kana chero mumwe wenyu akaronga kuwana imwe izvozvi mutengo 49,99 euros nekutumira mahara kana isu tine premium.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » HUB USB 3.0 - USB Type C yeMac kubva kuHooToo pamutengo wehafu